नाडेप लघुवित्तको चार करोड ८० लाखको आइपिओ आउदै, कस्तो छ पछिल्लो बित्तिय अवस्था..? – Insurance Khabar
नाडेप लघुवित्तको चार करोड ८० लाखको आइपिओ आउदै, कस्तो छ पछिल्लो बित्तिय अवस्था..?
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०५:०६
इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि चार करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने भएको छ । नाडेपलाई धितोपत्र बोर्डले एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा चार लाख ८० हजार कित्ता आइपिओ बिक्री गर्ने अनुमति दिएको छ ।
लघुवित्तमा नबिल बैंक, विकास आयोजना सेवा केन्द्र र लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीको लगानी रहेको छ । वि. सं. २०७० माघ १५ गते स्थापना भएको लघुवित्तले प्रधान कार्यालय सहित ६२ शाखा कार्यालयबाट लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
धादिङको गजुरीमा प्रधान कार्यालय रहेको कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गले गर्नेछ । कम्पनीले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न लागेको हो । चुक्त्ता पूँजी ११ करोड २० लाख रूपैयाँ रहेको छ । आइपीओ बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी १६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
लघुवित्तले चालु आर्थिक बर्ष (४०७४/०७५) को तेश्रो त्रैमाससम्ममा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, कम्पनीको चालु आर्थिक बर्षको कमाईलाई सन्तोषजनक नै मान्नु पर्छ, तर गत वर्ष सोहि अबधिको तुलना गर्दा कम्पनी को मुनाफा करिब २ करोड २० लाख ले घटेको छ । ११ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको लघुवित्तको जगेडा कोषमा १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । लघुवित्तको निष्कृय कर्जा २.२० प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म मुनाफामा सुधार गर्न सक्ने सम्भावना जिवितै रहेको हुदा कम्पनीको लगानी सुरक्षित र फलदायी हुनसक्ने दखिन्छ ।